Ogoow Soonku waa Cibaado iyo Caafimaad.=Haddad is mooday inaad Cilmi leedahay,waa lagaa Cilmi badan yahay Qur’aanka fiiri= - Latest News Updates
Ogoow Soonku waa Cibaado iyo Caafimaad.=Haddad is mooday inaad Cilmi leedahay,waa lagaa Cilmi badan yahay Qur’aanka fiiri=
Q-17aad: Soonka iyo Dr. Yoshinori
Dr. yoshinori Ohsumi . wuxuu ku dhashay Magaalada Fukuoka ee Dalka Japan, 9/2/1945.
Waxa uu Bare Sare ka noqday Jaamacadda “Tokyo institute of technology” iyo kuwa kale, waxa uu ku takhasusay Cilmiga “ Cell biology” Unugyada Jirku sida ey u shaqeeyaan. Waxa uu ku Guuleystay in kabadan 10 Abaal marin sida: Kyoto prize, Gairdner foundation International Award ugu Dambeyna Abaal marinta Nobel prize 2016.
Maxaa lagu siiyay? Waxa uu fur furay unugyada yar yar ee Jirka Bini Aadamka ku jiro, iyo sida ey u shaqeyaan, waxa uu soo ogaaday, unugyadaasi marka ey heer gaaran in ey dhintaan oo wasakh ahaan ey jirka u dhax yaaliin, loona baahan yahay in jirka laga saaro, ama in ey dib u howl galaan taa ayaana Badbaado u ah Qofka. Unugyadaa Waxaa ka dhalan karo Cudurada qaar sida: Dhiig karka, Sokorta, Duqnimada deg dega ah, Wadna xanuuka, stress- ka iyo Cudura kale.
Dr. Yoshinori ayaa yiri: si looga badbaado Cuduradaa ka dhalan karo, waxaa loo baahan yahay in qofku uuna wax cunin 8-16 saacadood, maalintii muddo bil ah, taasi waxa ey keenee in jirku uu dib u howlgalyo unuyadii Dhintay, ama suuxsanaa, Saacaduhu haddii ey ku bataan,dhakhtarka hala tashado, waxa kale oo haboon haddii uuna sidaa yeeli Karin, in qofku uu Usbuucii 2 Maalmood, uuna wax cunin 8-12 saacadood. Jirku hadduu 8 saacadood baahnaado kadib ayuu bilaabaa in Unugyadii Xumaaday uu dib u isticmaalo, Waxana uu culumadii hor keenay cadeeymo,muujinayo sida ey dhab u tahay aragtidiisu.
Dr.Yoshainori Arragtidiisa Khubaro ayaa dib u qiimeysay, waxaana looga yeeray Yurub, waa la siiyay Abaal marinta Nobel ee la yiraa waa tan Dunida ugu sareyso. Waxa uuna bilaabay Naftiisu in uuna wax Cunin.
Waxaa lagu yiri: In kasta oo aad unugyada Jirka aad furfurtay oo shaqadooda iyo sida cudurada looga Badbaadi karo aad sheegatya , Haddana in saacado badan aan wax la cunin oo ah bil/ sannadkii ama 2 maalin /usbuucii , waxaa hore u aaminsanaa oo waajib ey ku aheyd Muslimiinta Bisha ramadaan, Dr. Yoshainori oo aan Islaamka waxba ka aqoon ayaa la yaabay, sida faa’iidada Ramaadaanka ey uga faa’iideen Muslimiintu dhinaca caafimaadka.
Qur’aanka ayaa naloogu sheegay, naguna waajibiyay In Sanadkiiba Bil aan soono, iyo Sunno ah Usbuucii 2 cisho in aan soono. Rasuulkeena CSW ayaa na soo gaarsiiyay 1400 Sanno ka hor, Nabiga CSW oo aan isticmaalin qalabka lagu furfuro unugyada yar yar iyo Weeyneeysa lagu arko unugyada dhaxdooda illu ma aragtada ah.
Hadda mrkii ey heleen qalabka casrigaa, unugyadiina la fur furay ayey ogaadeen xigmadaha iyo faa’iidada soonka in ey ka mid tahay mid caafimaad.
Ogoow Soonku waa Cibaado iyo Caafimaad.
Adiguna wixii aan ka khalday ee Aqoon yaraani ii geeysay iga sax.